IFirefox iwine Impi Yesiphequluli | Martech Zone
Ukubheka isabelo semakethe sakamuva seziphequluli kunikeza ukuqonda kokuthi ngubani onqobayo futhi ohlulwa yizimpi. IFirefox iyaqhubeka nokwakha umfutho, iSafari inyukela phezulu, kanti i-Internet Explorer ilahlekelwa ngumhlaba. Ngingathanda ukuphawula ngalaba abathathu 'ngemibono' yami ngokwenzekayo.
Ngemuva kokubhubhisa iNetscape Navigator, IE empeleni yaba yindinganiso yegolide lenetha. Isiphequluli besilula, sisebenza, futhi silayishwe ngaphambilini ngayo yonke iMicrosoft Products. Futhi, i-ActiveX ibinokukhanya okufushane, okudinga abantu abaningi ukuthi basebenzise i-IE. Kungani usebenzisa iziphequluli eziningi lapho esinye sazo sisekela wonke amazinga ahlukene kuwebhu? Mina bengingumsebenzisi we-IE ngenguqulo 6.
Nge-Internet Explorer 7, umhlaba wokuklama iwebhu wawubambe umoya wawo ngesiphequluli ababengasihlelela lokho okungasabela ngokuya ngobuchwepheshe bamuva bamaCascading Style Sheets. Ngeshwa, IE 7 idumele. Ekubuyekezeni i-IE Blog, empeleni kwakungekho ngisho ne-radar kuze kube yilapho isiphequluli siyi-beta futhi ukukhala kobuhlungu kwavela embonini yokwakhiwa kwewebhu. Ukuthuthuka komzuzu wokugcina kulungise ezinye zezinkinga… kepha akwanele ukwenza umhlaba wezakhiwo ukuthi ujabulise. Khumbula - abaningi emhlabeni wokuklama basebenza kuma-Macs… entula i-Internet Explorer. Kepha, ngeshwa labo, amaklayenti abo asebenzisa i-Internet Explorer.
Kepha maye, nge-Internet Explorer 7, iMicrosoft ikushintshe ngokuphelele ukuxhumana phakathi komsebenzisi neklayenti. Ngobuchwepheshe be-technophile njengami, ezinye zezinguquko bezihlobo olupholile. Kepha kumsebenzisi ongaqondakali… ukungakwazi ukuzulazula ungene phezulu kwesikrini bekudida futhi kudida. Baqala ukubheka ukuthi yini enye eyayiphandle. IFirefox.
I-skrini kusuka http://marketshare.hitslink.com/
Ukulingisa ukusebenza kwesiphequluli okujwayelekile okubuyela emuva ku-Navigator, iFirefox yaba yisisombululo esisindayo se-Internet Explorer. Kuma-anarchists e-Microsoft ahlubukayo, iFirefox yaba yintandokazi futhi yaqala ukuboleka imakethe.
Ukusebenza okwengeziwe njengama-plugins amahle kakhulu wokuhlanganiswa nobunye ubuchwepheshe kube yisibusiso esihle kuFirefox. Baqhubeka nokuheha abathuthukisi kanye nabakhi bewebhu ngokufanayo… ngoba iFirefox inamaphutha aqinile, i-Cascading Style Sheet, nama-plug-ins wesithathu enza intuthuko nokuhlanganiswa kube lula.
Imakethe nayo iyashintsha. I-ActiveX ifile kodwa i-Ajax iyanda, iboleka iziphequluli ezinjengeFirefox. Asikho isizathu sokusebenzisa i-Internet Explorer ngazo zonke lezi zinsuku. Uma i-IE ingakwenza, iFirefox ingakwenza kangcono. Ama-Windows Updates asetshenziselwa ukudinga isiphequluli, kepha manje angalayishwa futhi afakwe ngaphandle kwawo.
IFirefox ayikushiyanga ukusetshenziswa kwayo nokuhlelwa kwayo njengoba iMicrosoft yenze nge-IE 7, okwenza kube lula kubasebenzisi ukuguqukela kuFirefox kusuka ku-IE 6 kalula futhi kalula. Inhle, iyashesha futhi ayinamthungo.
Ngokucindezelwa kwakamuva kweMac kumakethe ye-PC yasekhaya… akuseyona i-PC yamaYunivesithi, Abesifazane Nezingane. IMac yami entsha isebenzisa i-OSX, iWindows XP (enamaParallels) futhi ngikwazi ukusebenzisa zonke iziphequluli eziseplanethi ukuklama nokuthuthukela kuzo. Njengoba i-Safari ilayishwe kuqala, ngokungangabazeki ithola isabelo njengoba ama-Macs athola isabelo. Ukubikezela kwami ​​ukuthi iSafari izolahlekelwa yiFirefox, noma kunjalo.
IMicrosoft kumele izizwe isongelwa impela - kepha empeleni yiphutha labo. Baqede noma yisiphi isidingo sesiphequluli sabo, abasebenzisi abahlukanisiwe, abaklami abahlukanisiwe, onjiniyela abahlukanisiwe, FUTHI manje bavumela abanye ukuthi babangenise kwamanye ama-vertical (mobile).
I-Internet Explorer imane nje iyazilimaza. Angiqiniseki ukuthi ukugxila kwamakhasimende abo kukuphi nhlobo.
Ngemuva kokulanda nokufaka iFirefox, iya kufayela le- Izengezo bese ulanda kokuqukethwe yinhliziyo yakho. Noma ngubani owenza lokhu, ngingathanda ukuthi usebenzise isiphequluli amasonto amabili bese ubuyela engosini yami ungazise ukuthi ucabangani.
Sengibe ngumfana wakwaMicrosoft iminyaka engaphezu kweyishumi manje, ngakho angisiye i-basher. Kodwa-ke, ngizwe ngiphoqeleka ukuthi ngingene ngibonisane ngobudlwangudlwangu beqhinga iqembu le-IE elizithole lingena kulo.
Tags: impi yesiphequluliiziphequluliFirefoxiei-internet explorer 7-Microsofti-netcape navigator
Dec 8, 2006 ngo-11: 36 PM
Ngiyavuma ukuthi asisekho isizathu sokusebenzisa i-IE, kepha ngeshwa umhlaba usagcwele ama-novice we-intanethi angazi kangcono. Sethemba ukuthi umlomo uzokushintsha lokho ekugcineni.
Dec 9, 2006 ku-3: 54 AM
Ngibe ngumsebenzisi ojabulayo weFirefox iminyaka eminingana manje. Ngizizwa ngithandana nayo ngenxa yezandiso ezingenakubalwa, nokuphepha okwandisiwe kwe-Internet Explorer.
Lapho ngithola iMacBook Pro yami ekuqaleni konyaka, ngazama iSafari amasonto ambalwa, kodwa ngagcina ngokubuyela kuFirefox. Izinketho zokwenza ngokwezifiso cishe zingenamkhawulo. Ngonyaka odlule, ngiguqule ngempumelelo wonke umndeni wami (kanye nabangane bami abaningi) ku-Firefox.
Dec 9, 2006 ku-11: 27 AM
UPaul wayengafuni ukungiphoxa - kepha uzobona ukuthi ngihlele ama-phobias ami ukuze ngifinyelele! Ukubamba okuhle okuvela kuPaul owayenele ngokwanele ukungithumela i-imeyili! Abantu abangaziyo bayazi ukuthi ngiyisazi sokushaya isiNgisi. Ngempela umngane ozokusindisa ekuzihlazeni!
UPaul une-blog enhle lapha:
Dec 17, 2006 ku-1: 17 AM
Ngiyavuma ngokuphelele ukuthi iFirefox izoshaya IE 7 noma phambili….
Isizathu sokushaya ukuthi ama-plugins weFirefox nezengezo zeFirefox.
Ngicabanga ukuthi ngoJulayi 2007, IE izoma kuma-35%
Dec 17, 2006 ku-2: 21 AM
I-Assalamu, Fazal. Ngivumelana nawe! Njengoba iFirefox 3 Alpha isivele iphumile, iMozilla ivutha umzila iMicrosoft engakwazi ukuncintisana nawo.
Ngafaka i-IE7 kudeskithophu yami yedeskithophu futhi yasebenza kahle ngemuva kokuthi ngidlale ngayo kodwa lapho ngiyifaka kukhompyutha yami ephathekayo, kumise yonke into. Ukube bengingatholanga ukuthi uhlelo (ngaphandle kokungezwa) lufakiwe nezinhlelo zami ezingaphansi kwezinsiza bengingeke ngikwazi ukuqhubeka nhlobo.
Ngikhathazekile, ngenza amabhange online futhi angiqiniseki ukuthi ngingasebenzisa iFoxfire. Ngingathanda ukuzama kepha ngidinga imininingwane engaphezulu.
Ukubhanga kwanamuhla online kuhambisana nesiphequluli. Okuzobakhathaza ukusekela i-SSL (Secure Sockets Layer), lokho kuyindlela ebethelwe yokudlulisa idatha phakathi kwesiphequluli sakho namaseva aku-inthanethi asebhange. IFirefox isekela ngokuphelele i-SSL njengoba kwenza i-IE ngaphandle kwemingcele. Indlela esobala kakhulu yokwazi ukuthi usebenzisa i-SSL ukuthi uku-https: // ikheli esikhundleni se- http://. Kodwa-ke, zombili i-IE neFirefox (kanye ne-Opera neSafari) nazo zinezinkomba ezibonakalayo nezinqubo zokuqinisekisa ukuthi isitifiketi se-SSL nokubethela kuvumelekile futhi kusebenza kahle.
Ngamanye amagama - akufanele ube nezinkinga. Vele akukaze kube buhlungu ukubheka ikhasi le- “Support” lebhange lakho ukubona ukuthi bayayeseka yini iFirefox. Uzosithola ngempela isiphequluli esihle - sisheshe kakhulu ngezinto eziningi ezengeziwe.
Siyabonga ngokuvakashela… nangokuphawula!
Nov 3, 2007 ngo-5: 50 PM
IFirefox iwele uphawu lokulanda oluyizigidi ezingama-400 futhi, ngethemba, luzoqhubeka. Ezinye izindlela zihlala ziyindlela yenqubekela phambili.
Kepha ukuwina impi yesiphequluli… kusesekuqaleni kwalokhu.
Nov 3, 2007 ngo-11: 24 PM
Ngisebenzise i-IE iminyaka, ngiyaqhubeka nokuyisebenzisa futhi uma ngikhuluma iqiniso angithinteki ngezinzuzo zomsebenzisi zeFirefox. Ngisola ukuthi iningi labasebenzisi linganakekela kancane. Ngiyavumelana nawe, kepha, ukuthi ushintsho ku-IE 7 beludideka kancane.
Nov 21, 2007 ngo-8: 11 PM
Ngiyavumelana ne-yours yakho ku-IE7 nokuba ngumqambi wewebhu, ngaphoxwa ngezinto ezimbalwa lapho kukhishwa i-IE7. Njengamanje ngisezinhlelweni zokwakha iwebhusayithi entsha futhi ngithole izingqinamba ezithile ngama-divs kepha akukho lutho olukhulu (kuze kube manje). Ngisebenzise i-IE7 kancane kuphela kepha bengilindele ukweqa okukhulu kusuka ku-6.0 kubhekiswa ekusekelweni kweCSS, njll.
Ngibe ngumsebenzisi weFirefox iminyaka futhi ngiqashe abasebenzisi abasha abasha endleleni. Ngicabanga ukuthi into engiheha kakhulu, kanye nabanye abasebenzisi abaningi be-FF, ukuthi i-web designer / unjiniyela onobungani ngokweqile futhi ukwenza ngokwezifiso kuyayishayela. Ngicabanga ukuthi i-IE izoqhubeka ukwehla futhi ngicabanga ukuthi iMicrosoft izodinga isimangaliso kuleli phuzu. Umfutho osuzuziwe yiFirefox neSafari uyayithola kancane, idlula i-IE nokuthi baqhubeka besilela ekwenzeni isiphequluli esivumelana namazinga wewebhu, akubasizi ngalutho.
Abakhi bewebhu bethu bangabanika kuphela amathuba amaningi kangaka 😛
Nov 22, 2007 ngo-7: 44 AM
Lawa mazwana kunalokho ayadukisa. Ngokwezibalo zakamuva engizibonile isabelo se-IE “sesinciphe” sisuka ku-85.88% sabelo somhlaba wonke se-Q4 2005 saya ku-78.5% se-Q3 2007. Lokho kwehla ngo-7.3% cishe eminyakeni emibili.
Okwamanje, iFirefox isondezile kusuka ku-9% kuya ku-14.6% ngesikhathi esifanayo. Lokho kukwanda kwama-5.6% cishe eminyakeni emibili.
ISafari isuke ku-3.1% yaya ku-4.77% - ukwanda okungafanele neze ukukhuluma ngakho.
Yebo iFirefox iyathola ku-IE, kepha IE ngokusobala isenabasebenzisi abangaphezu kuka-5x.
Lezi zibalo zivela ku-Wikipedia “Usage_share_of_web_browsers” futhi-ke kungenzeka ukuthi zenzelela ngandlela thile.
Ngokusobala umhlaba wonke awunandaba ukuthi abaklami bewebhu bacabangani. Ngingacabanga ukuthi kufanele sakhele uquqaba kunokuba sikhathazeke ngokuthanda kwethu.
Nov 22, 2007 ngo-8: 48 AM
Ngiyabonga Rick! Singabuza ukuthi imithombo yakho ikuphi mayelana nezibalo?
Ngiyavumelana nawe, kodwa kunendaba yokuxwayisa ngokungakhathaleli ukuthi abaklami bewebhu bacabangani… futhi lokho kuklanywa kwewebhu kuzoqhubeka nokuba ibhizinisi elibizayo lapho kufanele udizayine ngaphandle kwamazinga ukushwelezela leso sabelo semakethe esingu-85.88%!
Nov 22, 2007 ngo-2: 25 PM
Kuhlala kuyinto eza kuqala ukwakhelwa uquqaba kepha iqiniso lokuthi iMicrosoft ayilandeli wonke umuntu, kwenza imisebenzi yethu ibe nzima kakhulu. Ngizithola kwesinye isikhathi kufanele ngibhale amashidi wesitayela ahluke ngokuphelele ku-IE kuphela futhi lokho kudla isikhathi. Akusho lutho kumsebenzisi ojwayelekile. Kuyakhathaza nje lapho isiphequluli esihola iphakethe kungukuthi sihambisana nezindinganiso zewebhu ezingatheni.
Nov 22, 2007 ngo-3: 44 PM
Angiphikisani nokukhathazeka kwakho ngombono womklami, noma kunjalo anginasiqiniseko sokuthi kungani uzokhathazeka ukuthi ungakhokhisa abantu kakhulu ngezinsizakalo zakho. Ngabe abantu abakulungele ukuyikhokhela? Ngokusobala lezi yizindaba zobuchwepheshe okufanele zinqotshwe.
Ngimane ngiphikisane nesiphakamiso sokuthi kukhona ukunyakaza okukhulu kude ne-IE. Izibalo (ngokwazi kwami) azisekeli leso simangalo, naphezu kwabo bonke abaklami nama-SEO abathi ngenye indlela futhi abagqugquzela ngokungapheli i-FF. Ukuthi kufanele ngabe bayayikhuthaza yini omunye umbuzo, futhi ungahle ube neqiniso ngokuphelele ngalokho.
Njengoba ngishilo ekuphawuleni kwami, umthombo wami wawuyiWikipedia - hhayi umthombo wokuzwakala ohlaba umxhwele kakhulu, kepha izinombolo zibukeka kahle ...
Nov 23, 2007 ngo-5: 42 PM
Cishe uqinisile kuzo zombili izingqinamba, Rick. Ngingasho ukuthi i-IE iyaqhubeka nokuba nesabelo esikhulu emakethe ngoba iyingxenye yoHlelo Lokusebenza, noma kunjalo. Ukube bekulanda ukulanda nokukhetha okulungile, ngiyakholelwa impela ukuthi i-FF izobe ikhahlela izinqe zayo.
Dec 21, 2007 ku-6: 51 AM
Ngangivame ukuba umqambi wohlelo nomthuthukisi wewebhu. Ngo-2003 ngaba sengozini ngashayisa ikhanda. Ukubhala ikhodi manje sekukuningi kakhulu kimi, ngakho-ke manje ngiyi-joe ejwayelekile..lol
Noma kunjalo, bengilokhu ngisebenzisa iLinux kusukela ngo-1996 (khumbula iCaldera-lapho bekufanele uyivumele izilande yona izinsuku ezi-2..lol). Iziphequluli zewebhu azikaze zikulungele ngaphambi kweFirefox. Lapho iFirefox iphuma, bekuyinto enkulu kunazo zonke kubasebenzisi beLinux (iThunderbird nayo). Njengoba iMicrocrap ibilokhu ijije abasebenzisi beLinux, bazidubula onyaweni. Ngikhumbula iFirefox / iThunderbird iba yi-internet suite ephezulu yeLinux kalula. Akunamandla, futhi ungabeka noma iziphi izandiso ozithandayo (adblockl!). Ngakho-ke, ilula noma inzima njengoba uyenza. Azikho izingxenye ezingadingeki nhlobo. Amathebhu apholile futhi mancane.
Njengamanje ngisebenzisa iWindows xp, ngoba 'abanye' lapha ngeshwa bakwenza kwaba yisimo sokuthenga le pc, ukuze 'bayisebenzise (izilima). Kungakho ngilande ngokushesha i-firefox / thunderbird. Ngenkathi ngisebenzisa iWindows futhi, NGANGIZONDA ukuvezwa kwe-Outlook, futhi ngangisafuna ukubuyela kwiFirefox, ngezandiso zami (ngaze ngagcina wonke amafayela we-config. Namabhukhimakhi wami avela ku-Linux, ngawangenisa ku-Winxp!).
Muva nje, i-pc yami iqale kabusha ngobusuku obubodwa, futhi benginaleli thuluzi lamathuluzi le-ALIEN elibukhali elinamathebhu ama-HUGE angeke aphele. Amabha wamathuluzi we-friggin athatha i-1/5 yesikrini esilahlekile! NGANGIKUZONDA! Wonke umuntu olapha naye wayezonda. Ikuphi inkinobho ye-STOP? Akekho umuntu ofuna ukuthi isiphequluli sithathe isikhala esiningi! Amathebhu amakhulu, noma ngabe kunekhasi elingu-1 kuphela !!
Kuthiwani ngekhasi lewebhu? Awukwazi nokukubona ngoba konke okubonayo kusiphequluli! Kuyaphazamisa kakhulu, ukuthi angikwazanga ukukuma. IMicrosoft kahle ayinayo indawo yokukhononda futhi. Yeka inqwaba yemfucumfucu egqokiwe. Ukulungiswa kwami ​​kwesikrini kusethwe ku-1152 × 864 futhi angikwazi ukucabanga ukuthi bekuyobukeka kanjani ku-800 × 6000! Ngingakwazi ngisho nokubona ikhasi?
Ngakho-ke izithupha ezi-2 phansi ze-IE7! Wonke umuntu uyakuzonda, futhi kungukufa kwe-IE. Kuyahlekisa, babenesiphequluli esilungile, kepha ngokukopisha iFirefox, manje abanayo i-junk. Ngiqonde ukuthi .. yini yonke le nto engekho emabha yamathuluzi, futhi izinkinobho zonke zikuphi ??
Ngakho-ke, ngiyabonga iMicrosoft, usuzenzile ekugcineni! Manje ngichitha isikhathi esiningi ngichazela abanye abashaya ucingo babuze ukuthi kungani isiphequluli sabo simbi kabi ngokuzumayo futhi siyinkimbinkimbi, futhi ngibasize ukukhipha i-IE7! Akekho oyifunayo!
May 28, 2008 ku-12: 30 PM
Ngicabanga ilungelo lakho Mnumzane Blog man, I have been using Firefox in my computer for more than a year now and have never looked back since. Noma ngubani owazi noma yini ngesoftware yekhompyutha angakutshela ukuthi iFirefox iyisiphequluli esiphakeme kunazo zonke izandla phansi. Angikaze ngiyizame isoftware yeThunderbird ngoba i-Outlook 2007 ku-Office Enterprise yinhle kakhulu futhi iyangisebenzela. Kungani uyiguqula uma ingaphuliwe. IE 6-7 iphukile, noma kunini lapho ngisebenza kubangani, umndeni, umngani we-inthanethi, noma nje umuntu ofuna usizo ngihlala ngifaka noma ngibatshela ukuthi bathole iFirefox. Akusiyo incwadi yokuqamba encwadini yami.
Ngifuna nje ukwazi ukuthi kungani iMicrosoft icabanga ukuthi ikhipha isiphequluli esiphakeme, ngabe ilungele ngokuphelele izwe elibazungezile? Ingabe kungenxa yokuthi bacabanga ukuthi isoftware yabo iyamangalisa kangangokuba abantu bazoyisebenzisa vele? Noma kungenxa yokuthi iMicrosoft ibithatha izigidigidi ngosuku futhi bathi “khohlwa umthengi asinendaba nokuthi bacabangani” ngakho-ke bacishe baphoqelela isiphequluli esingenamsebenzi futhi esingaphenduli emakethe. Idiots! Akufani nokuthi nginekhompyutha ye-junky, i-IE isebenza njengokukhwabanisa kunoma yiluphi uhlelo. Kufanele ibe kukhodi yesoftware noma okuthile.
Okokuzijabulisa nje ngiyilayishe namuhla ukubona nje ukuthi ithuthukile ngesimangaliso esithile (cha) esancela. Ngibe sengithi kimi “Kungani, kungani isebenza kanjalo” ngakho-ke ngacinga (Kungani i-Internet Explorer ilayisha kancane) futhi ngisebenzise usesho lwekhasi lasekhaya lakwaGoogle kuFirefox. Ngigcine lapha ngemuva kokulandela isixhumanisi esivela kwenye indawo esinendatshana enjengale kuso. Ngilandelwe eceleni ngakho-ke angikabi nayo impendulo yami okwamanje. Iya kuFirefox Go! Kick Bill Gates kumantongomane kithi sonke isikhathi esisodwa umuntu ngamunye ngokuqhubekayo. Ngizophawula ukudweba okukodwa emuva ku-FF, kodwa kubi ngokusetshenziswa kwememori. Umcabango olungiswe kalula, ukuqala kabusha okusheshayo, okungasheshi kuzokulungisa lokho.